Importance of the App – NHS COVID-19 app support - NHS.UK
Qof kasta oo soo dejista app-ka wuxuu ka caawin doonaa dagaalka ka dhanka ah coronavirus (COVID-19).
App-ka wuxuu ka caawin doonaa NHS-ta inay fahanto halka iyo sida ugu dhakhsaha badan ee fayrasku u fidayo, sidaa darteed way si dhakhso leh oo wax ku ool ah uga jawaabi kartaa. Appku wuxuu ka caawiyaa NHS inay la socoto fayraska, maahan shaqsiyaadka.
App-ku ma raadin doono adiga ama goobtaada. Waxaa taa bedelkeeda degmadaada koodhkeeda boostada ka caawisaa app-ka inuu ka shaqeeyo halka uu fayrasku ku faafo.
Degmada koodhkaaga boostada waa qaybta koowaad ee lambarka koodhka boostada, oo la mid ah ilaa 8,000 oo qoys oo kale. Marka ugu horreysa ee aad soo degsato barnaamijka, waxaa lagu weydiin doonaa koodhka boostada degmadaada.
Faa'iidooyinka raadraacista xiriirka ee app-ka
Appku wuxuu ka caawiyaa raadinta isticmaaleyaasha barnaamijyada ee wakhti ku qaatay meel u dhow isticmaaleyaasha app-ka ee kale, kuwaas oo laga yaabo inay iyagu shaqsi ahaan aqoon u lahayn, kuwaaso marka dambe laga helo cudurka coronavirus.
Qaabkan “is-xaadirinta” ayaa taageerta shaqadan kaaso si qarsoodi ah ugu digaya isticmaaleyaasha isla goobta joogay isla waqtigaas.
Raad raadcista xiriiriyaha App-ka waxay yareyneysaa waqtiga ay ku qaadaneyso in lagula socodsiiyo kuwa aad xiriirka dhow wada lahaydeen.
Hore : Soo bandhigidda app-ka NHS COVID-19
Xiga : Waxa uu app-ku sameeyo